हेर्नुस् ! भुपेन्द्र ह ‘त्या का ण्ड’को पत्ता लाग्यो,प्रहरीसँगको मिलेमतो देखिएपछि बुबा यसरी जं’गी’ए (भिडियो हेर्नुस्) – Sandesh Press
November 17, 2021 138
भुपेन्द्र केही दिनमा नै अ’मेरिका जाने तयारीमा थिए । अमेरिका जाने खुशिमा उनी साथिहरुसगँ केहिदिन यता सगै घुम्ने, खाने, खेल्ने गर्नमै ब्यास्त थिए । तर उनले त्यो खुशी भने पाउन सकेनन । कैलालि जिल्लाको टिकापुर लम्किचौवाका भुपेन्द्रलाई साथिहरुले नै घ’रबाट लि’एर बाटोमा लगेर योजनाबद्ध तरिकाले ह’त्’या गरेको खुल्न आएको छ । उनलाई आठ जना साथिहरुले मिलेर योजनाबद्ध तरि’काले ह’त्’या गरेका हुन । अहिले प्र’ह’रीले ह’त्’या’मा संलग्नलाई प’क्रा’उ गरेको छ।
Prevअन्तिलाई भेन्टिलेटरमा राखियो ,भगवान् भरोसा,बिनोद यसरी पुगे (हेर्नुस् भिडियो )
बच्चा जन्माउने सोचमा हुनुहुन्छ ? यो हो बच्चा जन्माउने उपयुक्त उमेर, नत्र…